Sidee farsamada raadinta u keentaa taraafikada organic?
In adduunka casriga ah ee digital marketing, waxaa jira siyaabo badan oo sida milkiilayaasha bogagga ay soo jiidan karaan gaadiidka ilaha webka. Shaki la'aan, waxaynu kala duwanahay. Waxaan soo jiidan karnaa kaliya ma'aha noolaha (raadinta) taraafikada, laakiin sidoo kale waa lacag, bulsho iyo gudbin. Dhammaan ilaha taraafikadaan waxay hagaajin karaan darajooyinka boggaaga. Si kastaba ha ahaatee, taraafikada (raadinta) dabeecada baabuurta waa hogaamiye cad oo ka socda taraafikada shabakada sida ugu habboon ee loo badalayo. Gaadiidka dabiiciga ah wuxuu ka badan 50% dhammaan dadka soo booqda labada shabakadaha e-commerce iyo blogs labadaba. Taasi waa sababta shaqadeena ugu muhiimsani ay tahay soo jiidashada dad badan oo khibrad leh oo raadinaya oo u beddelaya macaamiisheena caadiga ah ee bixiya. Dabcan, way sahlan tahay in la iibsado gaadiidka inta aan si caadi ah u helin. Si kastaba ha noqotee, isticmaalayaashu waxay kalsooni ku qabaan bogagga internetka kuwaas oo lagu meeleeyay TOP-ka raadinta dabiiciga ah. Intaa waxaa dheer, taraafikada dabiiciga ah ayaa aad loogu beegsan yahay inta la bixiyay oo leh fursado mudo dheer ah. Maqaalkani, waxaan ka wada hadli doonnaa waxa aan ka bilaabi karno gaadiidka laga helo matoorada raadinta dabiiciga ah.
Maxay yihiin sababaha lagu heli karo taraafikada raadinta organic?
Xaddiga ugu weyn ee faa'iido u helaya dadka isticmaala waxay ka soo baxaan goobtaada natiijooyinka raadinta dabiiciga ah. Waxay micnaheedu tahay in dhammaan dadka ku geli doona sanduuqa raadinta Google ee xogta iyo raadinta isweydaarsiga raadinta natiijooyinka baaritaanka. Haddii boggaaga boggu uu u dhigmo dadka isticmaala celceliska ujeedada, waxay u badan tahay inay ku soo gali doonaan boggaaga kuna beddelaan macaamiishaada ama macaamiishaada. Raadinta dabiiciga ah sidoo kale waxay faa'iido u tahay barista sida macaamiishu arki doonaan xayeysiisyo badan oo ku salaysan su'aalahooda. Sidaas awgeed, had iyo jeer waxay faa'iido u leedahay helitaanka taraafikada raadinta dabiiciga ah marka ay timaado dakhliga xayaysiisyada iyo barnaamijyada midnimada. Mid ka mid ah faa'iido dheeraad ah si loo soo saaro gaadiidka dabiiciga ah waa in aad yareyn karto heerka sare u kacda iyo hagaajinta khibrada user ee goobtaada.
Farsamooyinka shaqada si loo kordhiyo taraafiga raadinta
Aan ka wada xaajoonno farsamooyin wax ku ool ah oo kaa caawin kara inaad hagaajisid qiimeynta boggaaga, kor u qaadista qiimaha adoo isticmaalaya tarbiyada taranka. Naqshadeynta raadinta guluubka
SEO waa qaali ah farsamooyinka wax-qabadka ee ujeedada ugu muhiimsan taas oo ah in lagu wanaajiyo website-yada sida waafaqsan heerarka motor search engine. Mashiinnada raadinta sida Google waxay mudnaanta u siiyaan waayo-aragnimada isticmaalka bogga internetka ee gaarka ah, waa inaad sameysaa sida ugu fiican si aad u abuurto boggaga internetka ee sahlan iyo sahlan. Intaa waxaa dheer, goobtaadu waa inay ahaataa mid aad u khuseysa weydiinta su'aalaha. Waxaa jira laba nooc oo SEO ah - off-page iyo bogga-bogga. On-bog waxaa si buuxda u hagaya adiga iyo khubarada SEO. Waxay ku jiraan qoraalka qoraalka, cilmi-baarista muhiimka ah, is-bedelidda qaabeynta xiriirka iyo horumarinta bogga shabakadda. SEO-off-ka wuxuu ku sameeyaa hay'ad goobta ah indhaha makiinadaha raadinta. Waxaad ubaahan tahay inaad abuurto olole dhisme oo lagu guulaysto si loo horumariyo darajooyinka bogga iyo ilaha webkaaga kaaga muuqdaan SERP. Waxaa intaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in boggaagu uu yahay mid gurguurtan ah oo laga helo rukumo raadinta si uu u helo gaadiidka raadinta oo dheeraad ah. Si loo qiyaaso guushaada ololeyntaada, waxaad isticmaali kartaa aaladaha Google Analytics iyo Analyteth Web Site. Suuq geynta
. Fure u ah guusha abuurista wax weyn waa in la abuuro waxyaabaha loogu talagalay dadka isticmaala, ma aha matoorada raadinta. Your content content waa in ay ku haboon tahay waxa aad macaamiishu u baahan tahay raadin. Waxaad u baahan tahay inaad siiso adeegsadahaaga fikrad khibrad leh oo ku saabsan mawduuca ay xiiseynayaan si kor loogu qaado sumcadaada magacaaga iyo daacadnimadaaga astaantaada. Hubso in maaddadaada ay tahay mid gaar ah, khuseysa oo joogto ah. Intaa waxaa dheer, ku dhaji sharraxaad muhiim ah oo ku jira, gaar ahaan titles si aad ugu oggolaato boodhaha raadinta si sahlan u kala sooc goobtaada Source .